नाडाले पारदर्शी कारोबार गर्दै आएको छ | AutoExpress
नाडाले पारदर्शी कारोबार गर्दै आएको छ
यो संस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्रका सबै व्यवसायी (सवारी साधन आयातकर्ता, पार्टपुर्जा, लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री, टायरलगायतको समग्र हक, हितमा काम गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यो कार्यलाई अझ प्रभावकारी रुपले अगाडी बढाइनेछ । यो क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारीलाई कसर थप वृद्धि गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं । हामीले आजको दिनमा स्वच्छ प्रशाशन र
उपाध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल
नाडाले अहिले के कस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ?
यो संस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्रका सबै व्यवसायी (सवारी साधन आयातकर्ता, पार्टपुर्जा, लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री, टायरलगायतको समग्र हक, हितमा काम गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यो कार्यलाई अझ प्रभावकारी रुपले अगाडी बढाइनेछ । यो क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारीलाई कसर थप वृद्धि गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं । हामीले आजको दिनमा स्वच्छ प्रशाशन र स्वच्छ व्यवसायको नारा लिएर काम गर्न खोजिरहेका छांै । स्वच्छ व्यवसायको दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौं । सबै सवारी साधनको मूल्य संचारमाध्यमबाट प्रकाशित गरी सुचना प्रवाह गर्दै आएका छौं । आफूले बिक्री गर्ने बस्तुको मूल्य पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गरेर पारदर्शी हिसाबले काम गर्न खोज्ने संस्थाहरु को को छन् भनेर खोजियो भने नाडा मात्र भेटिन्छ । आजको दिनमा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्न सरकार सफल पनि भइरहेको छ । यातायातका साधनको कर, भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट, कर्पोरेट कर, आयकर सबै जोड्ने हो भने यो क्षेत्रबाट राजस्वमा करिब २० प्रतिशत योगदान हुन आउँछ । हामीले राष्ट्रलाई गर्नुपर्ने योगदानमा आगामी दिनमा पनि कमी हुनेछैन, यो अवस्थामा सरकारसँग स्वच्छ प्रशाशन मागेका छौं । सरकार पनि स्वच्छ प्रशाशन भएर काम गर्न राजी भएको स्थिति छ । बर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रशाशन, भन्सारलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरिरहेको पाएका छांै । अन्य कमजोरीलाई सुधार गरेर सरकार अघि बढ्यो भने हामी पनि सँगसँगै अघि बढ्न सक्छौं ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले के कस्तो चुनौती देख्नुहुन्छ ?
यातायातको लागी मुख्य चुनौती भनेको सडक पूर्वाधार हो । सडक बिना यातायातको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । २० बर्ष देखि खोलाका करिडोर बनेका छैनन् । टेकु देखि पुशपतिसम्मको कुनै पनि खोलाको बाटो बनेको छैन । हामी नकरात्मक त छौ तर आशाबादी छौ । अझंैपनि स्थायी सरकारले विकास गर्ला भन्नेमा हामी आशाबादी छौ । राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव देखाउँदै लगानीमैत्री बातावरण नबनाएको हामीले बार बार बताउँदै आएका छौ । बैंकहरुले पैसा कमाउँने उद्योगी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने यो देशको अवस्था रहेको छ । यो संसारमा नभएको नियम हो । सरकारले मौद्रिक नीतिमा ब्याज घटाउँछु भनेको थियो । त्यसको लागी पनि तीन महिना लाग्ने कुरा आएको छ ।
नेपालमै अटोमोबाइल उद्योग स्थापना गर्न किन नसकेको हो ?
हामीले अहिलेसम्म आवश्यक भएको सवारी साधन विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गरिरहेका छौं । तर, स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न चुकिरहेका छौं । अटोमोबाइलको आयात धेरै भयो भनेर व्यावसायीहरु स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न कम्मर कसिरहेका बेला सरकारले अनुत्पादक सूचीमा बर्गिकरण गर्दा ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भने जस्तै भएको छ । अर्कातिर ब्याज बढाएर खरिद गर्नै नसकिने स्थिति बनाइएको छ । अटोमोबाइलका साधन त जतिसक्दो धेरै नागरिकको पहुँचमा बिस्तार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रोत्साहन गरेको खण्डमा बजार बढेर उद्योग खोल्न हौसला मिल्छ । सरकारले अनुत्पादक भनिदिने हो भने व्यावसायीमा अनुत्पादनशील बस्तु किन उत्पादन गर्ने भनेर उद्योग स्थापना गर्ने सोच बदलिन सक्छ । यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता विकास हुन नसक्ने स्थिति पैदा गर्छ । सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना भएको खण्डमा त्यसको सहायकको रुपमा स्पेयर पार्टस्, लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्रीलगायतका उद्योग खुल्न शुरु हुन्छन् । जसले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सृजना गर्नुका साथै करलगायतका माध्यमबाट राष्ट्रलाई समृद्धि बन्ने योजनामा सहयोग पु¥याउन सक्छन् ।
सडकमा गाडीको संख्या बढी भयो भन्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । यसमा तपाईको भन्नु के छ ?
नेपालमा गाडीहरुको संख्या सडकको क्षमता भन्दा धेरै भयो भन्ने तर्क नै ठिक छैन । आजको दिनमा पनि १ प्रतिशत नेपाली जनतामा मात्रै आफ्नै गाडीको पहुँच छ । त्यसैले गाडीको संख्या धेरै भएको होइन, सडक कम भएको हो । सरकारले सडक पूर्वाधारको विकासमा लाग्नु पर्छ। यहाँ राम्रा सडक नै छैनन् । भएका सडकको पनि मर्मतसम्भार हुँदैन । सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा गाडीको जाम देखेर क्षमताभन्दा बढी गाडी भयो भनिरहेको छ । आयात कम गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । त्यो सरकारले जनताप्रति सकरात्मक सोच राखेको होइन । आफूले चाहेको गाडी खरिद गरेर चढ्न पाउनु जनताको अधिकारको कुरा हो ।
यो क्षेत्रमा सरकारले यति कर लगाएको छ कि त्यो सोच्नै नसकिने छ । दुई सय, तीन सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । यसले उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ । अहिले पनि मान्छेहरू तीन–चार दिन हिडेर घर जाने गरेका छन् । सडकको अवस्था मात्रै सरकारले राम्रो बनाउन सके देशले छिटो विकासको गति लिन्छ ।
यातायात क्षेत्र भनेको विकासको पूर्वाधारको प्रमुख हिस्सा हो । यो बिना कुनै क्षेत्रको विकास संभव छैन । त्यसैले हामीले गाडी बिक्रि गर्न मात्र नभई यातायातको महत्तवबारे जानकारी दिन पनि नाडा मेलाको आयोजना गरेका हौँ ।